Izingane nabafazi bakaDmitry Khvorostovsky, isithombe. Unabantwana abangaki eHvorostovsky? Owesifazane uSvetlana noFlorance, isithombe
Umculi we-opera owaziwayo emhlabeni wonke u-Dmitri Hvorostovsky uhlale eveza umbono onamandla kakhulu: isitayela esihle, isifuba esinamandla, ukubukeka okuqothulayo, izandla eziqinile ... Akumangalisi ukuthi yena nempilo yakhe yangasese banesithakazelo kubafazi. Muva nje, umculi wathola isisu sobuchopho. Ubani osekela uHvorostovsky esimeni esinzima? Futhi kanjani ubuhlobo bomculi nezingane kanye nomfazi wangaphambili?
Ubani owayeyindoda yokuqala kaHvorostovsky
U-Baritone wakhe wokuqala wothando wahlangana eKrasnoyarsk Opera House, lapho esebenza ngemva kokuphothula iziqu. UBalerina Svetlana, umlenze onomdwebo odwebekile, unqobe umculi omncane. Osebenza nabo babonisa ukuthi wayengowesifazane ohambayo, kodwa u-Dmitry, othandweni, akazange akhathalele. Akazange abe namahloni ngisho nangenxa yokuthi uSvetlana wahlukana, kodwa waqhubeka ehlala endlini efanayo nezingane zakhe nomyeni wakhe wokuqala.
UHvorostovsky wayelithanda uSvetlana, wabuza izimbali, futhi ngemva kweminyaka emibili lo mbhangqwana washada. U-Dmitry wavuma ngisho nokwamukela indodakazi kaSvetlana - Masha. Akekho ozakwethu nabalingani bomculi abavumile lo mshado. Ngokushesha umkakhe wokuqala wabonisa isimo sakhe sangempela: UDmitry wamthola embhedeni nomngane wakhe. Umculi womzwelo wahlasele umthengisi kanye nomthandi wakhe, engakhulumi kokubili.
Naphezu kokungathengi, lo mbhangqwana waxoxisana. Bathi emva kokuba uKhvorostovsky ashaye umkakhe, akakwazanga ukukhulelwa isikhathi eside. Ngokusobala eLondon, wenza inqubo yokuqothulwa kwamakhelwane futhi ngo-1996 wabeletha amawele amabili - u-Alexander noDaniel.
UDmitry Hvorostovsky nomkakhe uFlorence
Ngemva kokuthuthela eLondon, umculi waqala ukwakha umsebenzi wakhe, futhi umkakhe uSvetlana wayehlezi nezingane zakhe. Kodwa enhliziyweni yakhe, uDmitry akakwazanga ukuthethelela ukukhwabanisa kwakhe: ukuziqhenya kwakhe kwamadoda kwawa ngokuphelele! Le ntombazane Khvorostovsky yaqala "ukuphatha" utshwala, okwakubonakaliswa kabi ngezwi lakhe nasemsebenzini wakhe, futhi ngokushesha umculi wathola isilonda.
Lapho amawele eseneminyaka emithathu ubudala, uDmitry wadala umculi nomculi we-Florance. Wahlangana naye eGeneva Theatre, lapho adlala khona ... UDon Juan. Ngokusho kombhalo, uDmitry noFlorence babanga ngothando ngesiteji, futhi lolu daba lwadlula esiteji sezemidlalo ukuya ekuphileni. I-brunette evuthayo ayinandaba nokuthi umculi wayeseshadile futhi unezingane ezincane, waqhubeka efuna uthando lwakhe. Futhi i-baritone ayikwazanga ukumelana nayo. Kamuva uyavuma emaphephandabeni ukuthi kwakunguFlorence owamsiza ukuba abhekane nezinkinga zangaphakathi nokudakwa ngokweqile. Waba "ijacket" lakhe.
Ukuhlukanana noSvetlana kwakunzima kakhulu. Owesifazane okhubazekile wanquma ukususa yonke impahla kumculi. Ngenxa yalokho, washaya amakhilogremu angama-200 ayizinkulungwane eziningana ngonyaka ukuze alondoloze yena nabantwana bakhe. Futhi ngemva kweminyaka engu-10 isihlukaniso, lesi samba sipheze kabili! Manje uDmitry uzolahlwa ukukhokha umkami wokuqala kuze kube yilapho engashadile ngokomthetho, ukuze yena nabantwana bakhe emndenini wokuqala bangaboni ubunzima bezezimali.
Njengoba umkakhe wesibili wakwazi ukugcina uHvorostovsky
Owesifazane wesibili we-baritone wabonisa ngokushesha ukuthi owesifazane wase-Italy onobubele wayekulungele yini ngenxa yendoda yakhe ethandekayo. Wafunda isiRashiya, wafunda uDostoevsky noChekhov, wafunda ukupheka izitsha zakhe ezithandayo zaseRashiya zomyeni wakhe. Uthi wayekulungele ukuzinikela ekhaya nasemndenini, ngakho uDima othandekayo wayehlale enelisekile futhi enelisekile ngempilo yasemakhaya.
Ngo-2003, umkakhe uFlorence wazala indodana kaMaxim, futhi ngo-2007 indodakazi kaNina. Lesi sikhathi, uKhvorostovsky wayejabulele kakhulu ububaba bakhe. Konke okufanayo, uSvetlana owayengenangqondo akakwazanga ukumnika lokho okwakunikezwa nguFlorance, okungukuthi, ukunakekelwa, ukwethembeka nokwethembekile ngemuva. Emfanekisweni waleso sikhathi, umculi wayebukeka, mhlawumbe, indoda ejabule kakhulu emhlabeni. Sekuyiminyaka engu-15 ehlala ndawonye, ​​uFlorence waba mnumzane wakhe, inkosikazi, umkakhe kanye nomngani omkhulu.
Bangaki abantwana uHvorostovsky anakho futhi benzani?
Bonke abafowabo bomdabu basekhaya baseLondon abahlala emlonyeni wabo bonke abahlabeleli, balondoloza ubuhlobo obuhle phakathi kwabo. Njengoba isehlukaniso nomkakhe wokuqala kwakuyihlazo nobuhlungu, uHvorostovsky akavamile ukubona amawele emshadweni wawo wokuqala. Basaphila enhloko-dolobha yaseBrithani noSvetlana futhi bahamba ngezikhathi ezithile ukuhlaziya umculi. Kodwa owake wangumkakhe akavumeli izingane ukuba zihlanganyele emakhonsathini, ziphikisana ngokuthi "azikaze zikhule". Endabeni yokuxoxisana, umculi ugwema isihloko sokukhulumisana nezingane kusukela emshadweni wokuqala, ukubiza ngokuthi kubuhlungu kakhulu.
Kodwa umkakhe uFlorence kanye nezingane zomculi basekela ngokugcwele kuye. Abangena kuphela emakhonsathini nasezifundisweni, kodwa ngokuvamile bahamba noDmitri ekuvakasheni. Umculi uyaziqhenya ngokuthi uMaxim noNina sebevele bekhuluma izilimi ezintathu! Uzama ukukhulisa izingane ngothando futhi akhulumi ngisho namazwi abo. Njengoba umculi evuma kwenye yezingxoxo, manje ufisa ukufika ekhaya ngokushesha, ukuze wonke umndeni uhlangane. Eceleni kwezingane, indoda ekhuluma kahle futhi ecasulayo enezinhlamvu eziyinkimbinkimbi iba yethenda futhi inomzwelo. Futhi lapho uDmitry eqala ukukhala, ezwa indlela indodakazi yakhe uNinochka ehlabelela ngayo. Umculi ubiza izingane zakhe zinekhono elikhulu kakhulu. Ubani owaziyo, mhlawumbe bazolandela ezinyathelweni zikababa odumile!
Kule ngxoxo, uKhvorostovsky ukhuluma njalo ngothando lwazo zonke izingane, ngaphandle kokukhipha noma iyiphi yazo. "Nginezingane ezine, ngoba ngikulungele noma yini. Kungakhathaliseki ukuthi kuphakama ubunzima nengane yakho, izingane zihle kakhulu futhi zithenda ezisekuphileni, "kusho uDmitry.
Izingane nabesifazane basabela kanjani esibhedlela sikaHvorostovsky?
Ngemva kokuthola ukuxilongwa okubi, i-baritone yaqala ngokushesha ukwelashwa. Esibhedlela usekelwa nguFlorence, Maxim noNinochka. Umculi akaqapheli ukuphumula okuphuthumayo, ngakho uzama ukuhamba okuningi nomndeni wakhe emoyeni. Ngandlela-thile, ngo-June 25, u-Hvorostovsky waqala ukuletha umndeni wakhe eKrasnoyarsk wakubo. Ngokusobala, ekwazi ngokugula kwakhe, wanquma ukwenza uhambo olunjalo lokufanisa ukutshela umndeni wakhe kuqala ngomndeni wakhe omncane nangemibandela ayehamba ngayo.
Umculi unethemba elikhulu, ngaphezu kwalokho, ngo-5 Julayi uKhvorostovsky wakhuluma e-Embassy yaseRussia e-UK, eyathokozisa abalandeli be-singer. Futhi emva kwekhonsathi, ukwamukela kwakubanjelwa udumo lukaDmitry. Sithemba ukuthi ukusekelwa ngumfazi nezingane ezinothando kuzosiza u-Dmitry Hvorostovsky ukuba anqobe lesi sifo, futhi ekwindla uzobuyela ekuphileni okuvame ukuvakasha!
Izibhamu nge ingulube
Izakhiwo zokuphulukisa kwekhasi le-walnut
Ukulungisa izinwele ekhaya
Isaladi se-Sea Star
Ama-pancake aqoshiwe, isidlo esiphundu sokudla kwansuku zonke kanye netafula lokugcoba, zokupheka nezithombe
Isaladi isithombo se-black
Izinkukhu ezibhemayo eziphekwe ushizi namazambane
Okroshka on kvass nge isoseji
Ungadla kanjani emasontweni okuqala okukhulelwa?
Ukuthuthumela ngaphansi kwamehlo? Siyaqeda ama-folk amakhambi